COVID-१९ भ्याकेसनहरू अनुसूचीको पछाडि छन्: हामी कसरी यता फेर्न सक्छौं - Nawalpur Dainik
विज्ञहरू भन्छन कि यो COVID-19 खोप प्रक्रिया छिटो भन्दा छिटो गर्नु महत्वपूर्ण छ।
उनीहरू भन्छन कि संयुक्त राज्यले वितरण र पहुँच मुद्दाहरु समाधान गर्नुका साथै खोपका व्यक्तिलाई खोप लिन मनाउनु पर्छ।
विज्ञहरूले राष्ट्रपति चुने जो बिडेनको कार्यालयमा पहिलो १०० दिनमा १० करोड डोज पुर्‍याउने लक्ष्यलाई हिट गर्ने महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको बताएका छन्।
यो लक्ष्य हासिल गर्दा, छोटो अवधिमा, कम अस्पतालमा भर्ती हुने र मृत्यु हुने उनीहरूको भनाइ छ।
उनी फेब्रुअरीदेखि नै मान्छेहरूको उपचार गर्दैछिन्, COVID-१९ सामान्यतया जिब्रो बन्द गर्न अघि।
झन्डै एक वर्ष पछि, डा। एलिसा शेचेटर – पर्किन्स, आपतकालीन चिकित्सा निर्देशक र बोस्टन मेडिकल सेन्टर / बोस्टन युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनमा संक्रामक रोग व्यवस्थापन निर्देशक, खोपहरू हतियारमा जाँदैछन् भन्ने तथ्यले प्रोत्साहित भएको छ।
“मैले यस ठाउँमा सिभिडका सयौं बिरामीहरूको हेरचाह गरें, जसमध्ये धेरै घर फर्केका छन्, जसमध्ये धेरैलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ, जसमध्ये केही मरेका छन्,” शचेटर-पर्किन्सले हेल्थलाइनलाई भने।
“मलाई लाग्छ कि हामीले सुरुको अन्त्यमा प्रकाश देख्न सक्छौं। यो अझै उज्यालो छैन तर, यो त्यहाँ हुँदैछ, “उनले भनिन्। “यो यस्तो प्रकारको हो कि ध्यान दिन यो हामी अन्त गर्न सक्दछौं। मैले यो बारेमा कुरा गर्न मात्र शुरू गरेको छु। यो धेरै लामो बर्ष भयो। ”
यस महिना COVID-19 सम्बन्धित मृत्युको रेकर्ड संख्याको साथ, खोपहरू ती हतियारहरूमा छिट्टै जान सक्दैनन्।
रोलआउट ढिलो भएको छ। गत हप्ता एक अन्तर्वार्तामा डा। एन्थोनी फौसी ट्रस्टेड स्रोत, देशका अग्रणी महामारीविज्ञानीले भने कि यो विशालताको एक परियोजनाले निश्चित रूपमा चुनौतीहरूको सामना गर्यो।
“मलाई लाग्छ कि अर्को केही हप्तामा के हुन्छ हेर्न मात्र उचित हो। यदि हामीले मूल लक्ष्य के हो भनेर बुझ्न सकेनौं भने हामीले के गरिरहेका छौं भनेर हामीले वास्तवमै केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ, “फौसीले एनपीआरको“ बिहानको संस्करण ”भने।
गति लिनको लागि के गर्न सकिन्छ?
केही विज्ञहरूले हेल्थलाइनलाई भने कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राख्नु राम्रो छ जस्तो कि राष्ट्रपतिले चुनेको जो बिडेनको प्रशासनले घोषणा गरेको जस्तै: १० करोड डोज उनको कार्यालयको पहिलो १०० दिनमा प्रशासित।
विज्ञहरूले हेल्थलाइनसँग यो पहललाई अघि बढ्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि साझा गरे, बिडेनले कस्ता कठिनाइ सामना गर्नुपर्‍यो र यदि त्यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाले उक्त छाप पारेमा यसले कस्तो असर पार्नेछ भन्ने कुरा साझा गरे।
क्याच-अप प्ले गर्दै
जनवरी २०१ 14 सम्ममा COVID-१९ खोपको १० करोड भन्दा बढी खुराक दिइयो। यो ट्रम्प प्रशासनका २० करोड अधिकारीहरूले डिसेम्बरको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने आशा गरेको भन्दा कम हो।
टेनेसीको न्यासभिलस्थित भान्डर्बिल्ट मेडिकल सेन्टरमा संक्रामक रोगहरूको डिभिजनका प्राध्यापक डा। विलियम शेफनरका अनुसार यहाँ कोष एक महत्वपूर्ण तत्व हो।
“हामी कसरी क्याच-अप खेल्न सक्छौं? हामीले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्, ”शेफनरले हेल्थलाइनलाई भने। “जसमध्ये एउटा सुरु गरिसकेको छ, जुन एकदमै आलोचनात्मक छ, जुन राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य विभागलाई केही पैसा उपयुक्त छ। हामीले करदाताहरूले पर्याप्त मात्रामा पैसा हालेको छ, सबै भन्दा पहिले धेरै खोप विकास गर्दै, अत्यन्तै सफल, र त्यसपछि खोपको क्लिनिकल परीक्षण गर्दै, अत्यन्तै सफल। ”
“हाम्रो शर्त चुक्ता। हामीले यी दुई प्राप्त गर्यौं – अब सम्म र अधिक आउन सक्छ – असाधारण सफल र धेरै सुरक्षित खोपहरू, “उनले भने।
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा आपतकालीन प्रयोगको लागि डिसेम्बरमा दुई COVID-19 खोपहरू अनुमोदन गरिएको थियो। तिनीहरू Moderna-NIAID र फाइजर- BioNTech खोपहरू हुन्। पूर्ण सुरक्षाको लागि दुबैलाई दुई खुराकहरू धेरै हप्ताहरू छुटिको आवश्यकता पर्छ।
विश्वास गर्दछ कि वाशिंगटन, DC. का अधिकारीहरूले सायद कदर गरेनन् कि संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले सबैभन्दा कठिन वितरण चरणमा प्रवेश गर्दैछ।
“यो तेस्रो चरण हो, जहाँ हामीले वास्तवमा सम्पूर्ण संयुक्त राज्यको जनसंख्याको सम्पूर्ण मानिस वा यसको नजीकका मानिसहरूका हतियारमा खोप दिनु पर्छ, र हामीले त्यो पहिले कहिले गरेका थिएनौं,” उनले भने।
“त्यो धेरै लामो लिने छ। यो धेरै धेरै गाह्रो छ। यो स्टेज एक र दोस्रो चरण जत्तिकै जटिल छ, यदि यति धेरै छैन भने किनभने तपाईले मानव जातिको व्यवहारलाई समावेश गर्नुपर्नेछ, देशका सबै मानवजातिलाई, र त्यो धेरै गाह्रो छ, “शेफनरले भने।
राज्य र स्थानीय स्वास्थ्य विभागहरु को विगत २० बर्ष मा आफ्नो बजेट संकुचित भएको छ, उनले भने, यस प्रयास को लागी हात मा पैसा प्राप्त गर्न को लागी धेरै लामो हुनेछ।
“म चाहन्छु कि पैसा महिना अघि विनियोजन गरिएको भए सबैलाई अगाडि बढ्न सकिन्छ र हामी तयार छौं। त्यसैले पैसा महत्त्वपूर्ण छ, ”उनले भने।
Schaffner लाग्छ यो खोपको डेलिभरी स्पष्ट गर्नको लागी आलोचनात्मक रुपमा पनि महत्वपूर्ण छ, यस्तो कुरा जुन अहिले सम्म भइरहेको छैन।
“मलाई थाहा छ मेरो आफ्नै राज्यमा स्वास्थ्य विभागहरू र अस्पतालहरू र अन्य ठाउँहरू छन् जुन योजना बनाउन कठिनाई भइरहेको छ किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन कि उनीहरू कति खोप लिने छन् र कहिले,” उनले भने।
“तपाईं क्लिनिक कसरी चलाउन चाहानुहुन्छ र थाहा छैन [कति खोप लगाईदिनुहुन्छ]। यदि तपाईं कारहरू बेच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले कतिवटा कारहरू पाउनु भयो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो। ”शेफनरले भने। “हामीले खोपको डेलिभरी स्पष्ट पार्नुपर्दछ र यसलाई अनुसूचीमा ल्याउनु पर्छ, त्यसैले यो राम्रोसँग र सहजसँग, पूर्वानुमान योग्य शैलीमा सर्छ।”
अमेरिकी सार्वजनिक स्वास्थ्य संघका कार्यकारी निर्देशक डा। जर्जस सी। बेन्जामिनले भने कि हामीले यस प्रक्रियामा मानिसहरूलाई अझ राम्रोसँग संलग्न गर्नु आवश्यक छ।
“अहिल्यै, यो सुन्दर अस्पताल केन्द्रित छ र उनीहरूले अस्पतालहरू भन्दा पर जान आवश्यक छ, त्यसैले यदि तपाईं एक अस्पताल हुनुहुन्छ वा अस्पताल वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, वा नर्स, वा अस्पतालमा खाना सेवा कर्मचारी संग जोडिएको छ भने, तपाईं खोप लिन सक्नुहुन्छ। “बेन्जामिनले हेल्थलाइनलाई भने।
“तर यदि तपाई समुदायमा एउटा निजी कार्यालय हुनुहुन्छ र तपाईलाई अस्पतालमा जोडिएको छैन भने ती व्यक्तिहरु लाई खोप लगाउन वा उनीहरू कसरी जान्छन् भनेर पत्ता लगाउन धेरै गाह्रो भइरहेको छ,” उनले भने।
हामीले यो कसरी गर्ने भनेर सृजनात्मक रूपमा सोच्न महत्त्वपूर्ण छ, हार्वर्ड मेडिकल स्कूलको संक्रामक रोग सेक्सनमा औषधीका सहायक प्राध्यापकका साथै बेथ इजरायल डेकनेस मेडिकल सेन्टरमा संक्रामक रोग परामर्शदाता डा। बोस्टन मा।
“हामीले यो योजनाको साथ अगाडि बढ्नको लागि हामीले कसरी आफ्नो स्थानीय, राज्य र राष्ट्रिय संसाधनहरूको लाभ उठाउछौं भन्ने बारे सृजनात्मक हुनु आवश्यक छ,” उनले हेल्थलाइनलाई बताइन्। “के हामी पहिले नै अवस्थित आधारभूत संरचनाको लाभ उठाउन र यसलाई खोप साइटहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्छौं? खोप साइटहरू निर्माण गर्न सहयोग पुर्‍याउन के हामी राष्ट्रिय गार्डलाई सक्रिय गर्न सक्छौं? के हामी [मामिलाहरू] खोप लगाउन सहयोग पुर्‍याउने जस्ता चीजहरू गर्न सक्छौं? ”
“यसका लागि हामीसँग भएका संसाधनहरूको कसरी उपयोग गर्ने भन्ने बारेमा केही रचनात्मक सोच आवश्यक छ र ती स्रोतहरू मानिसहरूलाई खोपमा मद्दत गर्न प्रयोग गर्दछौं,” शाखा-इलिम्यानले भने।
शेचेटर-पर्किन्स सहमत भए कि देशको रूपमा हामीले जनसंख्या कसरी पुग्ने भन्ने बारेमा अझ बढी सोच्न आवश्यक छ।
“यसले काम गर्ने छैन यदि यो केवल स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरू हो, ठूला अस्पताल प्रणालीहरू, किनकि अहिले हामी प्रमुख क्षमता मुद्दाहरूको सामना गरिरहेका छौं, केवल कर्मचारीहरूको पक्षमा किनकि हामी भित्र छौं जुन महामारीको दोस्रो लहर हो,” उनले भनिन्। ।
“यो प्रणाली खोपका सबै गर्न र रसद समन्वय गर्न मेडिकल केन्द्रहरू र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीहरूमा भर पर्न सक्दैन, त्यहाँ अझ बढी सहयोगको आवश्यकता छ,” शचेटर-पर्किन्सले भने।
उनले युरोपका देशहरू औंल्याए जसले उनीहरूको ठूलो खोप योजनाहरूमा सहयोग पुर्‍याउन स्रोतहरू एक साथ ल्याएका छन्।
“उनीहरूले स्टेडियम स्थापना गरेका छन्, तिनीहरूले वास्तवमै उनीहरू कसरी व्यापक वितरण गर्न सक्छन् भन्ने कुराको बारेमा धेरै सोचिरहेका छन्,” उनले भनिन्। “र हामीले एउटा देशको रूपमा सोच्नु पर्छ। यो महामारी हो, यो एउटा स is्कट हो, यो समय हरेक संसाधनमा कल गर्ने हो। हामीले सेना सेनाले क्षेत्रिय अस्पतालहरू स्थापना गरेझैं बिरामीहरूमा पनि यी खोपहरू लिन हामीले अत्यन्तै कडा कदमहरू चाल्नु पर्छ। ”
रोलआउट ढिलो भएको बेला, शाखा-इलिमान अझै आशावादी चीजहरू लिन्छन्।
“जब हामी अगाडि बढ्छौं, हामी काम गर्ने प्रणालीहरू र काम नगर्ने प्रणालीहरूको बारेमा थप जानकारी भेला गर्न लाग्छौं,” उनले भनिन्। “हामी त्यो जानकारीको प्रयोग गर्न सक्छौं र यसलाई ठूलो समूह खोप अभियानमा अनुवाद गर्न सक्छौं ताकि आशा छ कि हामी अहिले भएको स्थितिलाई सुधार गर्न सक्छौं।”
Prevकसले गर्न सक्छ र सुरक्षित रूपमा COVID-19 खोप प्राप्त गर्न सक्दैन
NextCOVID-19 खोपमा प्रयोग गरिएको नयाँ टेक्निक mRNA फ्लू, एचआईभी खोपको लागि अग्रसर हुन सक्छ